Wararka Maanta: Isniin, Apr 8 , 2013-Dib u dhac ku yimid Shir looga hadli lahaa Ammaanka Soomaaliya oo ka Furmi lahaa Xarunta Itoobiya ee Addis Ababa
Shirkan ayaa waxaa looga hadli lahaa maamul u sameynta gobollada dalka ee laga saaray Al-shabaab inay hoggaanka u qabato Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa ammaanka deegaannadaas.
Wasiirrada arrimaha dibadda ee dalalka IGAD ayaa shalay is-arkay iyadoo dowladda Kenya ay sheegtay inuusan jirin mas’uul shirkan ku meteli kara xilliga maadaama ay ku jiraan xilli kala guur ah, waxayna codsatay in dib loo dhigo.
Inkastoo dowladda Soomaaliya ay kasoo horjeesatay dib u dhacaas ayaa haddana waxaa ugu dambeyn lagu heshiiyay in shirka dib loo dhigo, iyadoo laga yaabo in caleemo saarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee Kenya uu shirkan ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sida ay sheegayaan wararka hoose waxaa lagu wadaa in shirkan oo markii hore ahaa heer wasiir uu isku bedelo heer madaxweyne ayna madaxda dalalka IGAD isugu tagaan magaalada Nairobi si ay ammaanka Soomaaliya uga hadlaan.
Madaxweynaha cusub ee Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa in berri oo Salaaso ah loo dhaariyo xilka madaxnimo ee dalkaas, kaddib markii uu ku guuleystay doorashooyinka dalkaas, iyadoo lagu wado inuu ka qaybgalo caloomo-saarkaas madaxweynaha dalka Suudaan, Cumar Xasan Al-Bashiir oo baadi-goob ay ku hayso maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC.
Arrimaha uu shirkan sida tooska ah u taaban doono ayaa waxaa ka mid ah maamul u sameynta Jubbooyinka oo muran xooggan uu ka taagan yahay, sidoo kalena waxaa looga hadli doonaa arrimaha ammaanka, gaar ahaan goobaha Al-shabaab laga saaray.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh ayaa lagu wadaa inuu Somalia uga qaybgalo shirkaas; iyadoo sidoo kalena la filayo inay ka qaybgelaan madaxweynayaasha Jabuuti, Kenya, Itoobiya iyo Uganda oo ay ciidammo ka joogaan Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, isagoo kulammo looga hadlayo ammaanka Soomaaliya la leh madaxda Itoobiya.